Ethiopia Oo Heshiis Xasaasi Ah La Gashay Ruushka Iyo Ujeeddada Ka Damb...
Ethiopia oo heshiis xasaasi ah la gashay Ruushka iyo ujeeddada ka damb…
Addis Ababa (Wararka Maanta) – Dowladda Ethiopia ayaa heshiis Iskaashi Militari ah la gashay Ruushka, ka dib wada-hadal qaatay saddex maalmood, sida ay baahisay Wakaalada Wararka Ethiopia ee FANA.
Heshiiska cusub ee Ethiopia iyo Ruushka ayaa waxa uu yahay mid la xiriira Aqoonta Ciidan, Difaaca, Awoodda farsamo iyo qalabka ay adeegsanayaan.
Waaxda dhaqaalaha ee ciidamada difaaca ee Ethiopia ayaa saxiixay heshiiskan, kaas oo ay ku sheegtay inuu sare u qaadi doono “xiriirka soo jireenka ah ee labada dal”.
Siyaasada arrimaha dibedda Ethiopia ayaa muddooyinkii dambe u wareegtay dhinaca Shiinaha iyo Ruushka, tan iyo intii uu kordhay cadaadiska uga imaanaya xukuumadda Addis Ababa dowladda Mareykanka.
Mareykanka iyo Ethiopia ayaa waxa uu xiriirkooda sii xumaaday kadib markii ay xukuumadda Abiy ay dagaal bareer ah ku qaaday Tigray, kaasi oo ay cambaareysay xukuumadda Washington.
Taageerayaasha Abiy Ahmed ayaa bishii May soo abaabulay mudaharaad weyn oo looga soo horjeedo Mareykanka, kaasi oo ka dhacay caasimadda Addis Ababa, sidoo kale waxaa dibad-baxaas looga horyimid wax uu Abiy ku sheegay “fara-gelin shisheeye”, kadib markii ay walaac ka muujiyeen waddamada reer galbeedka xaalada dalkaas.
Waxaa xusid mudan in xukuumadda Biden ay xayiraad ku soo rogtay fiisooyinka iyo kaalmada dhaqaale ee dowladda Ethiopia, taasi oo sarre u sii qaaday xiisada labada dal.
Wararka Maanta : Xildhibaan Maydhane " Caddaalad darada Muuse ayaanu ka tagnay"
Xukuumadda Abiy ayaa xiligan fursad aargudasho u aragta iskaashi xoogan oo ay la sameysato dowladaha Ruushka iyo Shiinaha oo xifaaltan xoogan kala dhaxeeyo Mareykanka, oo ay si weyn isku hayaan Ethiopia.
Daawo: Xamza oo shaaciyey arrimo yaab leh oo uu ugu tegay wasaaraddii …
Ciidamada AMISOM oo sheegay in ay Kudhaa ku dileen 11 katirsan kooxda…
Wararka Maanta : Deg Deg: Farmaajo oo Aqbalay Xilka qaadista Fahad, Qorshaha Cusub ee Rooble...
Wararka Maanta : Tirada dhimashada ee rabshadaha Koonfur Afrika oo korortay - Caasimada...
Wararka Maanta : Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ciidamo u diray gobolka...
Wararka Maanta : Madaxweyne Farmaajo oo u hambalyeeyay raysal wasaaraha Ethiopia oo ku...
Wararka Maanta : Deg Deg: Farmaajo oo Dalab Culus udiray Mareykanka, Cabsi ka jirta Villa...
Wararka Maanta : Daawo: Cumar Filish oo faah-faahin ka bixiyey isku dayo la doonayey in...
Warka Caalamka8 mins ago
Wararka Somali10 mins ago
Wararka Videos22 mins ago